Kuthetha ntoni ukuphupha i-Exorcism? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Enye yezinto ezimbi kakhulu kwabanye kukuphupha i-exorcism, ngakumbi ngenxa yendlela ethathwa yi-cinema. Olu hlobo lwamaphupha luhlala lusoyikisa, kodwa intsingiselo inxulunyaniswa nobugqi. Rhoqo kuya kubonisa kuphela ukuba umphefumlo wakho uyabhadula ngelixa ulele.
Xa umntu elele, umphefumlo wakhe (umoya) awulali kwaye uqala ukuhamba kwiiplanethi ze-astral. Ingabonakala ngathi sisihloko esingummangaliso, kodwa inyani kukuba ezi zinto ziyenzeka. Yonke into iya kuchazwa ngokuchanekileyo ngeposi kwaye iya kushiya ukuqonda okungcono, kuba leyo injongo.
1 Intsingiselo yokuphupha malunga nokukhupha i-exorcism
2 Ukuphupha ukhutshwa ...
3 Ukuphupha loo nto ngokukhupha umntu ongamaziyo
4 Iphupha lombingeleli ongenawo
5 Ukuphupha ngokukhupha umfazi
6 Ukuphupha umntu ekhutshwa phandle
7 Ukuphupha ngomntwana okhutshelwa ngaphandle
8 Ukuphupha kukayise ekhupha i-exorcising
9 Ngaba olu hlobo lwamaphupha alulunganga?
Intsingiselo yokuphupha malunga nokukhupha i-exorcism
Intsingiselo ephambili inxulumene nendlela ozibona ngayo iingxaki zakho kwaye yile ngxaki kanye. Olu hlobo lwamaphupha luya kubonisa isidingo sokusebenza nzima ukusombulula iingxaki zabantu bonke. Umbono ophambili kukuba ukuphupha i-exorcism kuya kuyinika intsingiselo.
Ukuze uyiqonde ngcono, kwakuyimfuneko ukwahlula phakathi kwe-7 yeentlobo eziqhelekileyo zamaphupha. Kuba ngesiqhelo into efana ncam naleya izakukhankanywa kwizihloko ezilandelayo iyakuhlala isenzeka. Khumbula ukuba kunokubakho neentsingiselo ezifanayo, jonga ngezantsi:
Ukuphupha ukhutshwa ...
Luhlobo lwephupha elinento yokwenza nefuthe elibangelwa ziingxaki zakho. Kuba umbingeleli akayonto ingenguye ngaphandle kwakho, yingxaki yokuzama ukukufumana.
Inyani emva koku ilula kwaye kufuneka ugcine ukholo kuThixo nakuwe. Kusenokwenzeka ukuba ngexesha elifutshane yonke into iya kuphucula kwaye ifezekise zonke iinjongo ozizame ixesha elide.
Ukuphupha loo nto ngokukhupha umntu ongamaziyo
Intsingiselo yeli phupha iya kuba nento eninzi yokwenza nendlela ohlangabezane ngayo nabanye abantu. Ukuphupha ngokukhupha umntu ongamaziyo kubonisa ukuba ngamanye amaxesha ujonga abanye ngomnye umbono.
Eli lixesha elifanelekileyo lokwenza umahluko kwaye kungcono ukutshintsha ukusukela ngoku. Abo benzayo baya kuba nethuba elingcono kakhulu lokufikelela kwiinjongo zabo kwaye oku kuhlala kubalulekile.
Iphupha lombingeleli ongenawo
Ukuphupha unombingeleli onakho kunokubonisa isidingo sokuba nokholo olungakumbi. Kuyaziwa ukuba iingxaki ziyanda, oko kukuthi, kuya kufuneka uqaphele kwaye uzame ukuzilungisa. Eyona ndlela ilungileyo kukuba wena, ke ngoko, uphephe ukukhalaza kunye nokulwa ukuze uphumelele le mpikiswano inkulu.
Ukuphupha ngokukhupha umfazi
Umfazi unengqondo yesithandathu ebukhali kwaye ke olu hlobo lwamaphupha luya kubonisa isidingo sokulihlola. Eli lixesha elifanelekileyo lokuqalisa inkqubo yotshintsho kunye nokuhlalutya okungasebenziyo.
Ngokusisiseko oko kuthetha ukuba ngaphakathi kwexesha elifutshane, yonke into iya kuvela ngeyona ndlela ifanelekileyo. Nguwe obenoxanduva loku kwaye iphupha libonisa kuphela indlela ekufuneka ithathiwe.
Ukuphupha umntu ekhutshwa phandle
Indoda iya kuhlala inento enkulu yobudoda, oko kukuthi, ukomelela ngakumbi ubuntombi. Xa kwa into efanayo ikhutshiwe, luphawu lokuba into kufuneka itshintshe kwaye le yeyona nto ingcinga ephambili.
Isimo sakho sengqondo kwiingxaki khange sibe sesona sihle, ke zama ukuqonda ukuba ungazitshintsha njani izenzo zakho. Eli lixesha lotshintsho kwaye ekugqibeleni iyakuba loluhlobo lwesimo esiya kwenza yonke into isebenze.
Ukuphupha ngomntwana okhutshelwa ngaphandle
Mhlawumbi phakathi kwazo zonke iintlobo zamaphupha, ukuphupha ukukhupha umntwana ngamandla kuya kuba yinto eyomeleleyo. Olu hlobo lwamaphupha lubonisa ukuba umntwana uza kuvela kungekudala ebomini bakho kwaye kufuneka umncede.
Akusoloko kuthetha ukuba uya kuba ngumntwana, kodwa kunoko abanye abantwana abanokufuna uncedo lwakho. Kuhlala kunceda kuphela, kuba ukuba nesisa yenye yezona migaqo zibalulekileyo ziya kuhlala ziqwalaselwa.
Ukuphupha kukayise ekhupha i-exorcising
Umfundisi okhupha i-exorcist kuthetha ukuba nguwe ojamelene nabo bonke ubunzima obuye babonakala ebomini bakho. Ukuzimisela kwakho kukhulu kwaye kuyakwenza ukuba wonke umntu akubonge ngakumbi nangakumbi ekugqibeleni.
Isalathiso kukuba kufuneka uzame ukuqhubeka nokuvela, kuba ekugqibeleni iya kuba ngumahluko kwaye iya kukuzisela izibonelelo. Kodwa ukukuqinisekisa, kuya kufuneka uqale ngaphezulu kosuku ngalunye kwaye elo iya kuba lelona xesha lilungileyo lakho konke oku.
Ngaba olu hlobo lwamaphupha alulunganga?
Hayi, kuba kubonisiwe ukuba ukuphupha i-exorcism kunxulunyaniswe nento eyimfihlakalo kunye neengxaki zayo. Eli lixesha lokulungisa iimpazamo, kodwa zama ukuhlala uzolile kwaye ungenzi nantoni na ngokungxama, kuba iya kuba ngumsebenzi oqhubekayo kwaye ayisiyiyo into ekhawulezileyo.